Carlton Anosy : Nohorakorahan’ny olona Rajoelina -
AccueilRaharaham-pirenenaCarlton Anosy : Nohorakorahan’ny olona Rajoelina
25/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tofoka sy leo ny fitapitaka sy ny fampanantenana poakatin’i Andry Rajoelina ny olona. Araka izany, raha nanatanteraka ny fampahafantarana ilay IEM tetsy amin’ny Carlton Anosy ingahy Andry Rajoelina sy ny ekipany omaly, avy hatrany dia nirodorodo ireo olona marobe nilaanja sora-baventy tsy mankasitraka ny IEM. Misy amin’ireo sora-baventy nolanjain’izy ireo aza ny milaza mihitsy hoe “IEM = Voleurs”. Izany hoe, fangalarana ranofotsiny ihany ny IEM amin’ireto olona marobe milanja sora-baventy ireto fa tsy midika fampandrosoana ny firenena sy fanatsarana ny fiainam-bahoaka akory. Teo ihany koa ny sora-baventy hafa manambara fa tsy mila mpangalatra sy mpambotry firenena izy ireo, sns. Ankoatra izay, nibaribary ihany koa ny sora-baventy manambara fa manohana ny Fitondran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny fitantanany…
Noho izany indrindra, nisy ny horakoraka sy ny tabataba nampisehoan’izy ireo ny tsy fahafaliany amin’ny fanakorontanana ataon-dRajoelina sy ny ekipany tamin’izany nanoloana ny Carlton Anosy. Araka ny nohazavan-dramatoa Nivo Rasamoelina, anisan’ireo olona manohitra sy tsy mankasitraka an’i Andry Rajoelina sy ny fanakorontanana amin’izao fotoana izao, fa mila fitoniana ny vahoaka ary tsy mila an-dRajoelina sy ny ekipany nolazainy fa mpangalatra sy mpambotry firenena izy ireo. Izany indrindra no nanatanterahan’izy ireo hetsika fanoherana tamin’iny omaly iny.
Hita araka izany, fa tsy ankasitrahan’ny ankamaroan’ny olona ny fiverenan-dRajoelina sy ny ekipany eo amin’ny fitondrana. Maro ihany koa ireo mankasitraka ny ezaka nataon’ny fitondrana ankehitriny amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Mamita iraka eto Madagasikara ny delegasiona parlemantera vietnamianina tarihin’ingahy Phung Quoc Hien, filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena any Vietnam. Ny alatsinainy antoandro teo no noraisin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ireto delegasiona ireto izay ...Tohiny